‘अब फेरी पार्टीले गरिखान्छ’ भन्दै फर्किए लोकेन्द्र बिष्ट – YesKathmandu.com
‘अब फेरी पार्टीले गरिखान्छ’ भन्दै फर्किए लोकेन्द्र बिष्ट
बिहीबार १४, माघ २०७२
काठमाडौं, १४ माघ । ‘यो पार्टीले गरि खाँदैन’ भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीको पोलिटब्यूरो सदस्यबाट राजीनामा दिएका रुक्कमेली नेता लोकेन्द्र बहादुर बिष्ट फेरी सक्रिय राजनीतिमा आएका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादीको साधरण सदस्य मात्र बस्ने र सक्रिय राजनीति नगर्ने भन्दै केही महिनाअघि बिष्टले राजीनामा बुझाएका थिए ।
पाटी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा अस्वीकृत गरेपछि बिष्ट फेरी सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका हुन् । बिगत दुई महिनायता उनी एमाओवादीका सवै भेला र छलफलमा सक्रिय सहभागि हुन थालेका छन् । पार्टी अध्यक्ष दाहालले पनि उनलाई सवै कार्यक्रममा संगै सहभागि गराउन थालेका छन् ।
एमाओवादी नेताहरुको सम्पति छानविन समितिका संयोजन समेत रहेका बिष्टले धेरै नेताहरुलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेका थिए । तर पार्टी अध्यक्ष दाहाल र तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अकुत सम्पति आर्जन गर्ने नेताहरुलाई कारवाही गर्न रोकेपछि उनी रुष्ट बनेका थिए । बिष्टको कारवाही सुचिमा भट्टराई पत्नी हिसिला यमी पनि थिइन ।
‘पार्टीभित्र नेताहरु नाङगा जोगी नभई सम्पन्न शाली’ भएको ठहर गरेका बिष्ट गैरकानुनीरुपमा सम्पति आर्जन गर्नेलाई कारवाही गर्नु पर्नेमा पक्षमा अहिले पनि उभिएका छन् । पार्टीबाट राजीनामा गरेलगतै काभ्रेको भकुण्डेबेसीमा कृषक बनेका बिष्ट पछिल्लो समय ७ प्रदेशकै कार्यक्रममा सहभागि भएका थिए । एमाओवादीले बुधबारदेखि आफ्नामन्त्रीहरुसँग गरेको छलफलमा पनि बिष्ट सहभागि भएका थिए ।
कालोबजारी विरुद्ध ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्यो अखिल(क्रान्तिकारी)
पार्टी सभापतिका लागि सुजाता कोइरालाद्वारा उमेद्वारी घोषणा
वार्ताको पर्खाइमा सत्तापक्ष, घुर्कि देखाए प्रक्रिया जाने तयारी
चार बर्षमा गाई चिन्हका साढे चार लाख मत गायव, फापेन हिन्दुत्वको नारा
अबको क्रान्ति प्रचण्डविरुद्ध हुनेछ
सर्वाेच्चबिरुद्ध प्रचण्ड र बैद्यले दिउसै रत्नपार्कमा लालटिन बाले
सरकारमा महरा र सदनमा ओनसरीले नेतृत्व गर्नेः एमाओवादी
विप्लव माओवादीले भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्न २ सयको दस्ता खटायो
सभापति देउवा सिंगापुर जाँदै
महत अर्थमन्त्री हुँदा यसरी चुहिएको थियो बजेट !
चिनियाँ राजदूत सहभागि कार्यक्रम भारतीय राजदूतद्धारा बहिष्कार
के के आरोप लगायो कांग्रेसले वाम गठबन्धनमाथि ? प्रमूख ४ आरोपसहित;
प्रधानमन्त्रीले आज संसदमा राजीनामा दिने, अविश्वास प्रस्ताव मतदानमा नजाने